Maamulka Hir-Shabeelle oo shaaciyay Jadwalka doorashada 11 Kursi | Arrimaha Bulshada
Home News Maamulka Hir-Shabeelle oo shaaciyay Jadwalka doorashada 11 Kursi
Maamulka Hir-Shabeelle oo shaaciyay Jadwalka doorashada 11 Kursi
Bulsha:- Guddiga hirgelinta doorashooyinka Heer dowlad Goboleed ee Maamulka Hir-Sabeelle ayaa shaaciyay jadwalka doorashada 11 kursi ee ugu Dambeeysa kuraasta deegaan doorashadoodu tahay Magaalada Beledweyne.
Qoraal kasoo baxay Guddiga ayaa waxaa lagu sheegay in 5-ta ilaa lixda Bishaan ay soo gudbin doonaan Ergada, lana hubin doono kadibna la diiwaangelin doono Ergada si loo tababaro.
Sidoo kale Guddiga waxaa ay sheegeen in 7-Bishaan la diiwaangelin doono musharrixiinta ku tartami doonta 11 Kursi halka 8-da ilaa 9-ka Bisha ay qaban doonaan doorashada kuraasta kala ah.
1: Hop#004 oo uu ku fadhiyo Maxamed Xasan Ibraahim (Qoone).
2: Hop#010 oo uu hadda ku fadhiyo Cabdirisaaq Maxamed Axmed (JINDI).
3: Hop#011 oo dhowrkii sano ee la soo dhaafay uu ku fadhiyo Wasiirkii hore ee Amniga Cabdirisaaq Cumar Maxamed.
4: Hop#019 oo ay ku fadhiso Farxiyo Muumin Cali.
5: Hop#030 oo dhowrkii sano ee la soo dhaafay uu ku fadhiyo Daahir Amiin Jeesoow.
6: Hop#039 oo ay ku fadhiso Drs Maryan Axmed Haaruun.
7: Hop#058 oo uu hadda ku fadhiyo Nuur Iidow Beeyle.
8: Hop#059 oo ay ku fadhiso Samiiro Xasan Cabdulle.
9: Hop#063 oo uu ku fadhiyo Wasiirkii hore ee Waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre.
10: Hop#066 oo uu ku fadhiyo Cumar Cismaan Waasuge.
11: Hop#135 oo dhowrkii sano ee la soo dhaafay ay ku fadhiso Aamino Maxamed Cabdi.
Maamulka Hir-Shabeelle ayaa la filayaa in uu dhawaan soo geba-gabeeyo doorashada kuraasta taalla beledweyne kadibna uu qabto doorashada 5-ta Kursi ee uga harsan kuraasta taalla Magaalada Jowhar ee Caasimadda Hir-Shabeelle.